Lova Iraisam-pirenena UNESCO Sites In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Lova Iraisam-pirenena UNESCO Sites In Eoropa
Eoropa dia be UNESCO World Heritage toerana izay manintona ny an-tapitrisany mpizaha tany. Misy isan-karazany ny zavatra hita mba jereo - from an'ireo trano sy ara-kolontsaina tsangambato, ny zava-mahatalanjona voajanahary ny Old Kontinenta.
Miaraka dia toerana maro azo isafidianana, dia mety ho sarotra ho an'ny vahiny handray fanapahan-kevitra momba toerana halehany. Mba hanampy anao hifidy izay UNESCO World Lova toerana any Eoropa mba hijery aloha, efa nanangona lisitra fohy:
UNESCO World Lova Sites any Frantsa
Ny sasany amin'ireo miavaka indrindra UNESCO World Lova toerana any Frantsa dia ahitana fahagagana toy ny Versailles. Io no trano fonenana malaza indrindra sy manadino Frantsa. Toerana tsara tarehy iray hafa lazaina dia ny Abbey Fiangonan'i Saint-Savin-sur-Gartempe. Izany dia Romanesque fiangonana tamin'ny taonjato faha-9 amin'ny tany Poitou, Aquitaine vaovao.
Fa dia lavitra izay tia ny mahita zavatra ara-pivavahana, misy ihany koa ny Chartres Cathedral. Io daty katedraly katolika romanina avy tamin'ny taonjato faha-13, ary amin'izay hahitanareo any atsimoandrefan'i Paris. Farany, misy Mont Saint-Michel sy ny helo-drano. Izany dia nosy iray amin'ny stratejika manda niaraka avy 8 AD, miaraka amin'ny monasitera ho toy ny tena rafitra.
Paris mankany Lyon Highspeed Train
Italia Feno UNESCO World Heritage toerana, Noho izany dia Ho manonona ny sasany amin'ireo malaza indrindra ireo. Ny fijanonana voalohany no mpanao fikarohana ambanin'ny tany faritra Pompei, Herculanum sy Torre Annunziata. Ny manan-danja mifototra amin 'ny hoe izy ireo no fahiny sisa tavela amin'ny tanàna izay nalevina tao amin'ny fipoahan'ny Mt. Vésuve in 79 AD. Misy ihany koa ny Castel del Monte, lapan'ny mampiaraka avy tamin'ny taonjato faha-13. Koa satria miharoharo ny fitaoman ny EuropEân Cistercian Gothic sy Muslim maritrano, dia mahavariana fahitana.
koa, Italia no an-trano koa ny Piazza del Duomo in Pisa, ny malaza mirona sy tilikambo. Farany, misy ny ara-tantara foiben'ny roa tanàn-dehibe, Florence sy Roma. In Florence, rafitra misolo tena ny Renaissance maritrano fomba dia tsy maintsy-mahita. Aza malahelo ny Uffizi, Basilica Santa Croce ny, ary ny Florence Cathedral. tany Roma, tsy maintsy hijery ny afovoan-ny Fanjakana Romanina sy ny Katolika izao tontolo izao miaraka amin'ny be sy ny maro ny tsangambato toerana ara-kolontsaina.
Alemaina dia firenena iray ny lapa, katedraly, sy ny mahatalanjona UNESCO World Heritage toerana. Aachen Cathedral is the burial place of Charlemagne and the first-built vaulted structure since antiquity. Ny nanan-tantara malaza indrindra ao Alemaina iray hafa katedraly, izany iray tany Cologne. Tsy naka taonjato maro hanorina manomboka avy 1248. koa, sisin-tanin'i amin'ny Fanjakana Romanina koa mendrika ny fitsidihana. Ny olon-drehetra dia tokony hahita Hadrien Wall sy Antonine Wall, izay naorina 122 AD ary 142 AD, mifanaraka.
Fikarohana Upper Middle Valley Rhin dia tsy maintsy ho tsy hay hadinoina traikefa. Amin'io faritra io dia be an-trano ho an'ny maro trano fiarovana ary ny tanàna manan-tantara. Farany, misy Wurzburg Residence amin'ny Fitsarana Gardens sy Residence Square. Izany no iray amin'ny lehibe indrindra tranobe any Alemaina, lehibe ohatra niova indray fomba.
Ireo dia vitsivitsy monja maro mahafinaritra UNESCO World Lova toerana any Eoropa. Miaraka amin'ny soso-kevitra, tsy afaka mandeha diso nikarakara ny diany. Afaka hahatratra izany toerana lamasinina avy isan-karazany lehibe Eoropa tanàna.
Vonona ny hijery ny zavatra Eoropa tsy maintsy atolotra? Drafitra ny fitsidihana malaza UNESCO World Heritage toerana sy boky ny saran-dalana amin'izao fotoana izao!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto:https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/unesco-world-heritage-sites-europe/- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
europetravel longtrainjourneys trainjourney Tranride fiaran-dalamby Travel torohevitra travelfrance travelgermany travelitaly unesco